ထူးခြား၊ ကွဲပြားတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ အကောင်လေးများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingထူးခြား၊ ကွဲပြားတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ အကောင်လေးများ
January 30, 2021 Bo Bo Amazing 0
လူသားတွေအနေနဲ့ မွေးဖွားဖြစ်တည်ရာမှာ မျိုးရိုးဗီဇသဘောအရ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိ တက်ကြတာဟာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိသိသာသာကြီးကွဲပြားနေရင်တော့ ထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတွေနည်းတူပါပဲ အခြားသက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာလည်း ဒီလိုထူးခြားတဲ့ မွေဖွားဖြစ်တည်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ပုံမှန်နဲ့ မတူဘဲဘယ်လိုတွေ ထူးထူးခြားခြားကွဲထွက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ ….. ။ shwekhitonlinetv.com
၁။ သဘာဝတရားကတော့ ဒီယုန်ကလေးကို အတော်လေးရှည်လျားတဲ့ နားရွက်ကြီးတစ်စုံ ပေးထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂။ ဒီကြောင်က မျက်နှာကို မတူညီတဲ့ အရောင်(၂) မျိုးနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံး(၂) လုံးရဲ့ အရောင်ကလည်းမတူညီပါဘူး။ ဒါဟာ Photoshop နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံလား ? သဘာဝအတိုင်းလား ? ဆိုတာဝေခွဲဖို့တော့ ခက်လှပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ဒီသမင်တွေကတော့ ဆွီးဒင်နိုင်ငံမှာ အတွေ့ရများတဲ့ Reindeer သမင်မျိုးတွေပါ။ ပုံထဲကလို ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ကတော့ တစ်သက်မှာတစ်ခါမြင်တွေ့ရဖို့ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ ဒီခွေးဘီလူးလေးရဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်းက ခန္ဓာကိုယ်အရောင်နဲ့မတူဘဲ တစ်မူထူးခြားနေပါတယ်။ ဆေးခြယ်ထားတာလား ? သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာလား ? ဆိုတာထင်မြင်ချက်လေးပြောပြခဲ့ကြပါဦး။ shwekhitonlinetv.com
၅။ အင်တာနက်ပေါ်ကလူတစ်ချို့ကတော့ ဒီပုံကို Photoshop နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အပြင်မှာဒီခွေးကြီးတစ်ကယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင်ကော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ? shwekhitonlinetv.com
၆။ ဒီကြောင်လေးရဲ့ ခြေတံလက်တံကလည်း သာမန်နဲ့အတော်လေးကွဲပြားနေပြီး ရယ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ကိုရှည်လျားလို့နေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၇။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ လက်ချောင်းတွေသိသာထင်ရှားစွာပါနေတဲ့ တီကောင်လေးပါ။ shwekhitonlinetv.com
၈။ ဒီပုံထဲက ကမ္ဘာလိပ်ကြီးကတော့ မယုံကြည်နိုင်လောင်အောင်ကို အရွယ်အစားကြီးမားလို့နေပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး ရေငုပ်သမားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် (၂) ဆမက ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့နော် ….။ shwekhitonlinetv.com
၉။ ဒါကတော့ Big Jake (ကြီးမားတဲ့ဂျိတ်) လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကအရပ်အရှည်ဆုံးမြင်းကြီးပါ။ နီဘားစကား ပြည်နယ်ကလယ်သမားတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူ့အရပ်က (၇) ပေနီးပါးမြင့်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ ဒီကြောင်ကလေးရဲ့လက်ချောင်းတွေကထူးခြားနေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မလေးတွေနဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်ပါ။ shwekhitonlinetv.com
၁၁။ ဒီကြောင်ကလေးကတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုကျားသစ်ပေါက်စလေး တစ်ကောင်လို့ထင်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် အရောင်အသွေးကထူးခြားနေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၂။ ဒီနှံကောင်ကတော့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကနေထူးဆန်းစွာဖြစ်တည်လာတာလို့သိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က သစ်ခွပန်းအရောင်အဆင်းဖြစ်နေသလို သစ်ခွပန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေလည်းပါဝင်လို့နေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၃။ ဒီမြင်းလေးကတော့ အတော်ရှားရှားပါးပါး မြင်းကလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး သူ့ရဲ့အမွှေးအမြင်တွေက တစ်ခြားမြင်းတွေလိုမဟုတ်ဘဲ ကောက်ကွေးတွန့်လိမ်နေတယ်လေ။ shwekhitonlinetv.com
၁၄။ ဒီမြွှေကြီးကတော့ အရောင်အဆင်းထူးဆန်းလှပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းကတော့ ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး သရဲတစ္ဆေတစ်ကောင်ရဲ့ ပုံပေါ်လို့နေပါတယ်။shwekhitonlinetv.com
၁၅။ ကြောင်နဲ့ ကြောင်မျိုးနွယ်ဝင်သတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ နားရွက်တွေဟာ ချွန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိကြပါတယ်။ ဒါဆို ဒီနားရွက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ အကောင်လေးက ဘာကောင်လေးဖြစ်မလဲ ? shwekhitonlinetv.com
အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း အရောင်အသွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သတ္တဝါလေးတစ်ချို့ရဲ့ ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေကြည့်ရှုပြီး တစ်ခဏတာစိတ်အပန်းဖြေမှုကို ရရှိနိုင်ကြပါစေနော် ….. shwekhitonlinetv.com
(ယခုဆောင်းပါးကို Shwe Khit Online TV မှ ရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါ။)
ကမ္ဘာကျော် Cele များရဲ့ လူမသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ